कलाकारको ग्ल्यामर्स भजाउने होडबाजीमा दलहरू | News In Depth : Form Kathmandu Nepal
क–कसले पाउनेभए प्रेस काउन्सिल पत्रकारिता पुरस्कार ?
विमास्थलमा सामान हराउने तथा लगेज टुटफुटमा कमी
नेपालबारे कुटनैतिक : भूपरिवेष्ठित कि भूजडित ?
अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न
गोपाल खड्काको पदीय अवसान : यस्ता थिए उनका दुष्कर्म
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आगन्तुकलाई फूलले स्वागत
पत्रकारहरुको चीन भ्रमणमा गैरपत्रकार त्यो युवतीको चर्चा !!
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का पदच्युत
मधेशमा मतदाताको उत्साहपूर्ण उपस्थिति (तस्विरहरु)
निर्वाचनका लागि मधेशको मतदातामा उत्साह
६६२७ पदका लागि ३७२३६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा
भारतपछि प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका जाने टोलीमा को-को हुनेछन् ?
नेपालले भन्यो क्षेप्यास्त्र परीक्षण कायम राख्नु निन्दनीय
२६ घण्टासम्म नियन्त्रणमा रहेका कांग्रेस नेता पौडेल नेपाल फिर्ता
यस्तो रहेछ, ओली र नेपालको पानी बाराबार
Posted By: Chhaya Chandraon: January 11, 2017 In: मनोरंजन बिविदNo Comments
काठमाडौं । यतिखेर रेखा थापा र कोमल वलीको जताततै चर्चा छ । राप्रपाले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेको आमसभामा हजारौंको भीड जुटाउन सफल भएपछि रेखा र कोमल चर्चाको पात्र बनेका हुन् । दुई राप्रपा एकीकृत भएकै दिन कोमल वली राप्रपा प्रवेश गरिन् । त्यसको केही समयपछि कोमलले रेखालाई पनि भित्र्याइन् । हुन त राप्रपामा महिला नेतृहरूको कमी छैन । कुन्ति शाही, सरस्वति अधिकारी केसी, शैलजा पाण्डे, मिरा राणा जस्ता एक से एक महिला छन् । रेखा र कोमलले यसअघि कसैले गर्न नसकेको काम अर्थात् आमसभामा भीड जुटाएर देखाइदिएका छन् ।
आफ्नो पार्टीमा जुटेको भीड देखेर कमल थापा र पशुपतिशमशरेर राणा पनि दंग छन् । यसरी नै भीड बढ्दै गयो भने आगामी चुनावमा राप्रपा ठूलो पार्टी हुने र देशमा राजतन्त्र पुनस्र्थापित गराउन सकिने उनीहरूले सपना देखेका छन् । सोही कारण संविधान संशोधनमा सत्तामा सामेल भएर पनि राप्रपाले संविधान संशोधनको पक्षमा भोट नहाल्ने चेतावनी दिइसकेको छ । रेखाले अभिनय गरेको नयाँ चलचित्रले पहिलो र दोस्रो दिन सिंगल थिएटरमा सयौं दर्शकको भीड जुटाउने गरेको छ । तर, तेस्रो दिन लागेपछि रेखाको चलचित्रको चर्चा हुन छाड्छ ।
रेखा अभिनित चलचित्रको पोस्टरसमेत मल्टिप्लेक्स हलमा राख्न हल मालिक मान्दैनन् । अहिले पूर्वको झापा, मध्यमाञ्चलको भक्तपुर, मध्यपश्चिमाञ्चलको नेपालगन्जको आमसभामा मान्छेको भीड हेर्ने हो भने रेखाको पहिलो र दोस्रो दिन हलमा लागेको सिनेमाको जस्तै देखिएको छ । राप्रपाका नेताहरूका अनुसार हाल भइरहेका आमसभा पार्टीको इतिहासमै सबैभन्दा ठूला हुन् । ती आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेताहरूभन्दा रेखा थापा, कोमल वली, कुन्ति शाहीलगायतले भाषण गर्दा बढी ताली बजेको थियो ।
दुई राप्रपा एकीकृत भएसँगै पूर्वपञ्च र राजावादीहरूको मनोबल बढे पनि रेखा र कोमल वली उपस्थित हुने भएपछि मान्छेको भीड बढेकोमा कुनै दुईमत छैन । उनीहरूलाई हेर्नकै लागि पनि ग्रामीण क्षेत्रका मानिस आमसभामा सहभागी भएको देखिएको छ । ‘यसबाट राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा अभिनेत्री रेखा थापा र गायिका कोमल वलीको ‘ग्ल्यामर्स’ भजाउन सफल भएका छन्,’ एक चलचित्र निर्देशकले टिप्पणी गरे । हुन त दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि पनि रेखालाई हालको नेकवा माओवादी केन्द्रले यसरी भजाएको थियो । रेखा थापा र प्रचण्ड जहाँ जहाँ पुग्छन्, मानिसहरूको भीड त्यसरी नै लाग्ने गरेको थियो ।
तर, चुनावको नतिजापछि माओवादी तेस्रो पार्टीमा खुम्चन पुगेको अवस्था सबैलाई अवगत नै छ । खासमा क्षेत्रीय आमसभापछि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा पार्टीमा शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । विगतमा भन्दा आमसभामा मानिसको भीड बढी जुटाएपछि पशुपतिशमशेर राणा, डा।प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई कमल थापाले पछाडि पारेका छन् । कमल थापाको रेखा थापा र कोमल वलीको ‘ग्ल्यामर्स’ भजाउनुको मुख्य कारण फागुनमा हुन लागेको एकता महाधिवेशन रहेको राप्रपा नेताहरूको भनाइ छ । यसबीचमा देशव्यापी रूपमा पार्टीका गतिविधि र आमसभा गरी जनस्तरमा राप्रपा ठूलो शक्ति बन्दै छ भन्ने सन्देश दिएर आगामी महाधिवेशनमा कमल थापा अध्यक्षमा निर्वाचित हुने दाउमा रहेको बताइन्छ ।
राप्रपा प्रवेश गरेपछि रेखा थापाले पर्दाबाट भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा जनताको सेवा गर्ने भावले राजनीतिमा लागेको बताउँदै आएकी छन् । उनले अब आफू राजनीतिको ‘नायक’ बन्ने घोषणासमेत गरेकी छन् । राप्रपा प्रवेश गरेसँगै रेखाले नेपालमा हिन्दु धर्म आवश्यक रहेको भन्दै अन्य धर्मको खिल्ली उडाउन थालेकी छन् । अहिले उनी अभिव्यक्ति दिइरहेकी छन्, त्यसको असर उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘डायरी’ र ‘पलाँस’ प्रदर्शनमा देखिने चलचित्रकर्मीहरूको भनाइ छ । रामप्यारी चलचित्रले घाटा खुवाइदिएपछि चलचित्र निर्माणमा रेखा उदासीन बन्न थालेकी हुन् । अब तत्काल उनले चलचित्र नबनाउने उनी निकट कलाकारहरूको भनाइ छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै माओवादी प्रवेश गर्ने कलाकारको संख्या सयौं थियो । अहिले माओवादीमा दुई–चारजना मात्र छन् । अरुले छाडिसके । कलाकारलाई पार्टी प्रवेश गराएर चर्चा बटुल्नेमा डा।बाबुराम भट्टराई पनि अगाडि नै छन् । नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी घोषणा कार्यक्रमका दिन अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर, निर्देशक कलाकार अशोक शर्मा, अभिनेता सरोज खनाल, संगीतकार आलोकश्रीलाई प्रवेश गराइएको थियो । पार्टी घोषणाको एक वर्षपछि बाबुरामसँग करिश्मा र आलोकश्री मात्र छन् । अशोक शर्मा र सरोज खनालले नयाँ शक्तिमा त्यति चासो दिन छाडेका छन् ।
गराउने गरेका छन् । करिश्मा आउने भनेपछि नयाँ शक्तिको कार्यक्रममा मान्छेको भीड पनि बढेको छ । दोस्रो संविधान निर्वाचनका बेला नायक भुवन केसीलाई टिकट दिने चर्चा भयो । भुवन पनि दिनहुँ एमालेको बैठकमा देखिन थाले । तर, अहिले भुवन एमालेको कार्यक्रममा देखिन छाडेका छन् । एमालेमा आस्था राख्ने धेरै कलाकार भए पनि उनीहरूलाई अघि बढाउने, ठाउँ दिनेमा सो पार्टी अनुदार नै छ ।
२०५६ सालको उपचुनावताका नायिका मनिषा कोइराला नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको प्रचार प्रसारमा सरिक भएकी थिइन् । बुबा प्रकाश कोइराला रौतहट ४ को निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनावमा उम्मेदवार बन्दा मनिषा मुम्बईबाट नेपाल आएकी थिइन् । मनिषा आमसभामा आउने रे भन्ने सुनेरै उनलाई हेर्न हजारौं मानिसको भीड जुट्थ्यो । सो चुनावमा प्रकाश कोइरालाले जिते पनि । तर, पछि प्रकाश र मनिषा दुवैले कांग्रेस छाडे । तरुणबाट
गायक जय देवकोटाको दशै–तिहार परिवार गीत सार्वजनिक
युएनएफपिएको राहत लिएर बाढीपीडितकोमा पुगिन् मनीषा कोइराला
प्रमोद खरेलसहितका कलाकारले भद्रपुरका बाढीपीडितलाई राहत बाँडे
महाभुकम्प केन्द्रित ‘नीरफुल’ मा दयाहाङ र रेखा
शाहरुखको स्टारडम धरापमा : अर्जुन कपूरको फिल्मसँग हारे
सोशल भारल : लिवियाका गद्दाफीसँग वलिउडकी कैटरिना !
आमा बनेकी करीना कपुर, अब बन्दैछिन् मधुवाला
सञ्जय दत्तको बायोपिकमा काम गर्दे रणवीर कपुर
अनमोल केसीसँग रोमान्स गर्दे साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी
ब्रा र हाफ चोलिमा रियाले भनिन् : ‘लैजाउन घुमाउन ठमेल बजार’
मृत्युपूर्व यस्ता भएका थिए बलिउडका ‘डरलाग्दा’ भिलेन
सन्नी लियोनको विज्ञापन पुनः विवादमा (भिडियो सहित)
अप्रेशन: ताजा उपडेट
बजेट स्वाहा पार्ने अखडाको रुपमा वैकल्पिक उर्जा केन्द्र परिणत
इञ्जिनियर ढुङ्गानालाई मोसो र जुत्ताको माला लगाएर दुब्यबहार
सांसद अमरेश कुमारको PSO ले सर्लाहीमा गोली चलाए
सर्वोच्च अभियुक्त ढकालले अदालतलाई चुनौती दिए
निर्वाचनको सुरक्षा तयारी पूरा,सीमा नाका बन्द,सीमा नाका बन्द
‘रक्सी, मासु र पैसाले मतदाता प्रभावित बनाइँदै छ’
जोशी, महर्जन सहित चार नेता ललितपुर कांग्रेस सदस्यमा मनोनयन
उम्मेदवार शाहको घरमा बम विस्फोटन
तेस्रो चरण निर्वाचनकालागि ३८ हजार ४८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता
रामचन्द्र पौडेलले कुम्ल्याएका बारेमा छानबिन होला त ?
‘जसले हुर्कायो उसै माथी प्रहार गर्ने सांसदको नालीबेली यस्तो’
सुनसरीमा बालश्रम बढदै, सम्बन्धित निकायको काम कागजमै सिमित
घोटालामा खड्कासँगै तानिए पूर्वमन्त्री बोहोरा
सुबिधानगर - ३५, काठमाडौ, नेपाल
फोन नम्बर: ०१ - ४२६९९४१,
सम्पादन/ब्यवस्थापन समुह :
सम्पादक : बिरेन्द्र कुमार
कार्यकारी अध्यक्ष : सागर श्रेष्ठ